Rossy sy Sareraka : Miomana hamaky ny 13 Mey -
AccueilRaharaham-pirenenaRossy sy Sareraka : Miomana hamaky ny 13 Mey
Miketrika mafy ny hamakiana ny kianjan’ny 13 Mey ry Rossy sy Sareraka. Ho potika indray aloha izany ny tanànan’Antananarivo tahaka ny zava-nitranga nandritra ireo fanonganam-panjakana ny taona 1991 sy 2002 ary 2009. Ho may kila forehitra tahaka ny tamin’ny 26 Janoary 2009 indray koa ireo magazay sy tranombarotra, ary efa nanandrana izany asa fandrobana izany ireo irakirak’i Andry Rajoelina tamin’ny sabotsy lasa teo, saingy voasakana tamin’ny ora farany.
Nipoitra ihany ny nafenina, ary endrika ivelany fotsiny ihany ny filazana fa tatitra ataon’ny solombavambahoaka no hatao tetsy amin’ny lapan’ny tanàna. Mibaribary izao fa fanonganam-panjakana, ary efa mihoraka fandresena any amin’ny tambazotra any mihitsy aza ry Augustin Andriamananoro sy ny ekipany. Endrika ivelany tahaka ny nanomezana anarana ny kianjan’Ambohijatovo ho kianjan’i Demôkrasia, nentina nanangonana olona hampikatsoana ny fiainam-pirenena.
Porofon’izany, tsy solombavambahoaka MAPAR sy TIM fotsiny ihany no nandray anjara fitenenana teny amin’ny lapan’ny tanàna ny sabotsy lasa teo. Nandray “mégaphone” ihany koa ry Sareraka, ary dia izao miomana fatratra hamaky ny kianjan’ny 13 Mey anio izao miaraka amin-dry Rossy. Tazana teny an-toerana ihany koa moa ry Vahombey, kandida tamin’ny taona 2013 nahazo 0,7%.
Mandeha araka izany ny fanakaramana “gros bras” manerana ny boriborintany enina sy ny manodidina, amin’izao fikasana hamaky ny kianjan’ny 13 Mey izao. Mazava ho azy fa hiditra amina krizy vaovao indray ny firenena vao handalo krizy nandritra ny dimy taona, ary mbola eo am-panarenana ny fatiantoky ny firenena amin’ny sehatra rehetra ny fitondram-panjakana, tarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Dia ho latsaka anaty hantsana lalina indray ve izany ny firenena, ho potika tanteraka indray ity renivohitra ity?
Jaffar Younnous, karana iray ikoizana amin’ny resaka kidnapping, izay mbola mamita sazy eny Tsiafahy no nahavita sy tao ambadik’ilay raharaha fakana an-keriny ny tompon’ny tranombarotra Caromad etsy Tanjombato. Izy mihitsy no fantatra fa nanome baiko ...Tohiny